** မြို့မငြိ်မ်းနှင့်တူးပို့သင်္ကြန်** အပိုင်း -၁ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
** မြို့မငြိ်မ်းနှင့်တူးပို့သင်္ကြန်** အပိုင်း -၁
Music Crazy Te Te Tar Tar
“သင်္ကြန်အခါတော်…….” ဟူသော အသံနှင့်အတူ အရှေ့ဦးထိပ် တံခါးဆီမှ အမြောက်သံသုံးချက်ကို စတင်ကြားလိုက် ရ၏။ ၀မ်းမြောက် ပျော်ရွှင်ခြင်း၏ အသံလှိုင်းတစ်ခုက ရွှေမြို့တော်၏ ကောင်းကင်ယံဆီ လှိုက်ခါသွားသည်။
ဦးထိပ်တံခါးမှ အမြောက်သံက “သောင်းညွတ်” တံခါးဆီ ပြောင်းသွား၏။ ထို့နောက် တောင်ဘက်မျက်နှာ အင်္ဂါထောင့်က “ကျွန်းလုံးယူ”၊ ပြီးတော့ “ကျော်မိုး” ခေါ် “မင်္ဂလာ” တံခါး…..။ ဤသို့ဖြင့် တံခါး ၁၂ ရပ်တိုင်း၌ အမြောက်သံ သုံးချက်စီဖြင့် အမြောက်သံ သုံးဆယ့်ခြောက်ချက်တိတိ ကြားပြီးနောက် သင်္ကြန်တော် ကျချေပြီ။
ထိုအခါမှစ၍ “အစဉ်ထုံးစံ” ရှိသည့်အတိုင်း ရေကစားကြရသည်။ နံနက်နှင့် ညနေအချိန်မှသာ ရေကြည် ရေအေး အမွှေး အထုံရည်တို့ဖြင့် ဖျန်းပက်ကြသည်။ ဤသို့သာ ဖျန်းပက်ကြရန်ကိုလည်း သင်္ကြန် မကျမီကတည်းက မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင် ရပ်စုကွက်စုများ၌ မောင်းကြေးနင်းခတ်ကာ အသိပေးပြီးဖြစ်၏။
ရွှေနန်းတော်ကြီး အတွင်း၌လည်း စောင်းညှင်းပတ်သာသံများ ညှင်းညှင်းတွဲ့တွဲ့ ကြားကြရ၏။ ရွှေမြို့တော်ကြီး အတွင်း အပြင် တံခါးဆယ့်နှစ်ရပ်နှင့် အပြိုင်ဖောက်သွယ်ထားသော လမ်းမတွေပေါ်မှာ လုလင်ပျိုများက ငွေဖလားတွင် ထည့်ထားသော ရေသန့်ရေစင်များအား သပြေခက်ဖြင့် နှစ်ပြီး တူရူမှလာသော လုံမပျိုလေးများကို ယဉ်ကျေးစွာ ခွင့်တောင်းပြီး ပက်ဖျန်းကြသည်။ အတွင်းတော်မှ တီးခတ်လိုက်သော စောင်းသံနွဲ့နွဲ့က တံခါးနီကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ မင်းလမ်းမကြီးများ အတိုင်း လေးဘက်လေးတန် ပျံ့လွင့်လာ၏။ အဆောင်ဆောင် အခန်းခန်းကလည်း ထိုစောင်းသံနှင့် ထပ်တူမျှ လိုက်ပါ တီးခတ်ကြလေသော အခါ သာယာသောအသံလှိုင်းက ရွှေမြို့တော်ကြီးအား ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖုံးလွှမ်းသွားလေ သယောင်…….။
“စံရာတောင် ကျွန်းလုံးသူ့ ဥသျှောင် ကျင်ငယ်လေ…..
စံရာတောင် ကျွန်းလုံးသူ့ ဥသျှောင် ကျင်ငယ်လေ…..
အမရပူရနန်းစံ ရွှေဘိုမင်း လက်ထက်ကတည်းက မြ၀တီမင်းကြီးဦးစ ရေးသားခဲ့သော “စံရာတောင်ကျွန်း” အစချီ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ကြိုးသီချင်းအား သံပြိုင်တီးခတ်နေသည့် စောင်းသံတွင် အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ရွှေမြို့တော်သူ မြို့တော်သားတို့ ဆင်နွှဲနေကြသည်မှာ ယဉ်ကျေး ပါဘိတောင်း…။
အလွန်မွန်မြတ်၍ ကျက်သရေ ရှိလှစွာသော နှစ်သစ်နှစ်ကူး အခါတော်တွင် မင်္ဂလာရှိသော စကား၊ မင်္ဂလာရှိသော အပြုအမူ၊ မင်္ဂလာရှိသော အသံတို့ကိုသာ ပြုမူလေ့ရှိသည့်အတိုင်း မြို့တော်သူမြို့တော်သားတို့က သရီရဓာတ်တော် မွေတော် မြတ်ကိန်းဝပ်တော်မူသည့် ရုပ်ပွားတော်၊ ပုခန်းစည်သူရှင်ဘုရား၊ ရှင်မတောင်မြတ်ပေါင်း မဉ္စူဘုရား၊ ဒက္ခိဏသာခါဘုရား၊ သီဟတောဘုရား၊ ရှင်ဖြူဘုရား၊ နဂါးရုံဘုရား၊ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားရှင်တို့အား ရေမြေ့အရှင် မင်းတရားကြီး ကိုယ်တော်တိုင် မွန်မြတ်သော ရေမွှေးရည်တို့ဖြင့် သပ္ပာယ်ပူဇော်ကာ ဆွမ်းတော်ကြီး အဖွယ်အရာ စုံလင်ခင်းကျင်း ကပ်လှူတော်မူသည်။
ရွှေမြို့တော်သူ မြို့တော်သားတို့ကလည်း မြို့တော်၏ပြ လမ်းတလျှောက် ဝေကိုင်းဝါညွတ်နေအောင် ပွင့်ဖူးကြသည့် ပိတောက်ခိုင်၊ ပိတောက်ခက်တို့ကို ခူးဆွတ်ယူငင် ကြ၏။ ထို့နောက် အိုးစည်ပန်းကုံး၌ ထိုးစိုက်ပတ်ခွေပြီး ဗေထုံဗေထုံ အယိုင်တီး၍ ကခုန်ကြသည်။ ငွေဖလားတွင် သပြေခက်စိုက်၍ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရေကစားကြပြီး အလားတူ ဘုရားစေတီများသို့ တစုတဝေးတည်း သွားရောက်ကာ ရေကန်တော့ပူဇော်ကြလေသည်။
အရှင်နှစ်ပါး၏ နံတော်သင့် မဟာမုနိဘုရား၊ လောကမာရဇိန်ဘုရားရှင်တို့၌လည်း ဆွမ်းတော်ကြီး အဖွယ်အရာအစုံ၊ ပကတိရေ၊ အမွှေးအထုံရေစသော ရေမျိုးစုံများကို အစီအစဉ် အခမ်းအနားနှင့် တကွ မှူးတော်မတ်တော်တို့ အသီးသီး ကြီးကြပ်စေ၍ သင်္ကြန်အခါရက်များ အတွင်း နေ့စဉ်သွားရောက် ပူဇော်လှူဒါန်းကြသည်။ မင်းညီမင်းသား၊ မှူးတော် မတ်တော် အရာရှိ၊ လက်သုံးတော်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကွမ်းရေ၊ ထီးထား လက်စွဲအဆောင်မြဲတို့နှင့် အနောက် အတွင်းတော်ရှိ မင်းသမီး၊ မြို့စား၊ ရွာစား၊ အပျိုတော်၊ ကတော်မယားပါ ဦးရေတစ်ထောင်ကျော် တို့ကိုလည်း လွန်းများလက်ချိတ်၊ လွန်းများစပ်၊ ဗလာပိုးဖဲ၊ ပုဆိုး၊ ထဘီ၊ ခေါင်းပေါင်းအုပ်၊ ပိတ်အုပ်၊ ပုဝါအုပ်များကို ရာထူးဌာနန္တရ အလျှောက် အသီးသီး သနားတော်မူခဲ့သည်။
ရွှေနန်းတော်ကြီး အတွင်း၌သာမက မြို့တွင်းမြို့ပြင် ပြလမ်းများ၌ သင်္ကြန်ထမင်း အချိုအဆိမ့်များကို အရှင်နန်းမတော် ဘုရားဝန်၊ စာရေးကြီးတို့က ကြပ်မတ်ကျွေးမွေးပြန်ရာ ကျိတ်ကျိတ်တိုး စည်ကားပျော်ပါး ရွှင်မြူးသာယာလှသည်ဟု ဆိုကြ၏။
ဘုန်းပန်းငယ်ကြိုင်မွှေး၊ မြတ်လေးငယ် အတူ….
“စံရာတောင်ကျွန်း” စောင်းသံညှင်းက စည်းချက်ကျကျ ထွက်ပေါ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကြိုးကြားကြိုးကြား ပေါ်လာသော အိုးစည်သံနှင့် အတူ ရွှေမြို့တော်အနှံ့ အတာသင်္ကြန်ပွဲကား မင်္ဂလာရှိစွာ ဆင်နွှဲလျှက်ရှိကုန်၏။ မင်းဘုရင်နှင့် မိဖုရားတို့မှာ မြောက်ဥယျာဉ်တော်၊ အရှေ့မြောက်ထောင့်၊ အနောက်မြောက်ထောင့် တို့၌ သင်္ကြန်တန်ဆောင်း ပွဲခံကန္နားကဖျင်းများ ဆောက်၍ သင်္ကြန်မတိုင်မီ ကတည်းက မင်းညီမင်းသား၊ မှူးတော်မတ်တော်တို့ ဗောင်းနားဋောင်း ၀တ်လုံ စလွယ်ဆင်ယင်ပြီး ၀င်ထွက်ခစားစေ၏။ ထို့နောက် သင်္ကြန်အခါတော်နီးသည်နှင့် ကုန်းတပ်ရေတပ် ခင်းကျင်းကာ မင်္ဂလာမြောင်းတော်က ရေကြောင်းထွက်တော်မူခဲ့သေးသည်။
ယခု သင်္ကြန်အခါတော် အတွင်း၌ ရွှေနန်းတော်သို့ တက်တော်မူပြီး အငြိမ့်တော်များ၊ အတွင်းဆိုင်း၊ မွန်ဆိုင်း၊ ယိုးဒယား ဇာတ်ကြီး အဆိုအကများကို အခါသုံးရက် အတွက် နေ့ညဉ့်မပြတ် ကခုန်သီကြူး တီးမှုတ်သံများ၊ ရတနာပုံ နေပြည်တော်တ၀ှမ်း ပျံ့ထုံလွှမ်းခဲ့သည်။ မြို့စား၊ ရွာစား၊ အပျိုတော်တို့နှင့် လက်သုံးတော် လက်ဖက်ရည်တော်တို့ အမိန့်တော်မြတ်နှင့်တဦးကို တဦးပျော်ပါးစွာ ရေစင်သွန်းလောင်း ကစားကြသည်။ ရွှေမြို့တော်တွင်းရှိ နန်းတော်၊ အဆောင်၊ အိမ်ရာများ မကျန် အိမ်တိုင်းစေ့တွင် မြေအိုး၌ သပြေညွန့်၊ တမာညွန့်၊ သီးညွန့်၊ အုန်းလက်နှင့် မြေစာမြက်တို့ စုစည်းထိုးဆိုက်ထားသည့် အတာအိုးများကား နုသစ်လန်းဆတ်လျှက်…..။
အရှင်နှစ်ပါး ပါတော်မူပြီး ထီးကျိုးစည်ပေါက် ဖြစ်ကာ တိုင်းတပါးဘာသာခြား လက်အောက် ကျွန်သဘောက် ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရ သော်လည်း ကိုယ့်အမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်ရိုးရာ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို အပျက်အစီး အထိအပါး မခံဘဲ မန္တလေး၌ ကျန်ကောင်းကျန်ရာ ကျန်သင့်သော ဆွေတော်မျိုးတော်၊ မှူးတော်မတ်တော်ဟောင်းကြီးများနှင့် ဂုဏ်သရေရှိသော မြို့မိမြို့ဖများက တာဝန်တရပ်ကဲ့သို့ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ကြရင်း ယဉ်ကျေးမှု မဟာသင်္ကြန် ပွဲတော်ကြီးအား ဆင်နွှဲခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏။
ရှေးယခင်ကလို လေးပြင်လေးရပ်၌ ဓာတ်တံခါး၊ မိတ်တံခါးများမှ သင်္ကြန်အမြောက် ၃ ချက်စီကို တံခါး ၁၂ ရပ် အပြည့် ပစ်ဖောက်ခြင်းမျိုး မတတ်နိုင်ငြား….၊ အရှင်နှစ်ပါးမှ အစပြု၍ မဟာသင်္ကြန်ပွဲကို ရှေးထုံးရှေးနည်းများ အတိုင်း စောင်းသံ၊ အငြိမ့်သံ၊ ဆိုင်းသံခြိမ့်ခြိမ့်ဖြင့် မကျင်းပနိုင်ငြား….၊ ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်အခြေအနေ အရ တွင်ကျယ်စွာ သုံးစွဲလာသော လော်ရီကုန်ကားကြီးများအား ပန်းချီမဏ္ဍပ် ရုပ်လုံးရုပ်ကြွ အပြင်အဆင်များဖြင့် ခြယ်သ ကြသည်။ စောင်းညှင်း ပတ်သာများ အစား ခေတ်ပေါ် လေမှုတ်တူရိယာများဖြင့် ခေတ်မီခံ့ညားထည်ဝါစွာ သင်္ကြန် ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲပျော်ခဲ့ကြကုန်၏။
ကျော်မိုးတံခါး (၀ါ) မင်္ဂလာတံခါးရှေ့ ကျုံးကူး တံတားကြီးထိပ်မှ ကန်တော့ပွဲညွန့်ထိုးထားသည့် မဟာအတာ သင်္ကြန် ပွဲတော် ရှေ့ပြေးကားက အဆင်သင့် နေရာယူထားသည်။ သူ့နောက်မှာ ရိုးရာအတာသင်္ကြန် အလှပြကားတွေက အစီအရီ….။ မင်္ဂလာတံတားပေါ်….။ မင်္ဂလာတံခါးအောက်…..။ ထို့နောက် နန်းတွင်း အင်္ဂါထောင့် ကွင်းပြင်ကြီးထဲ အထိ….။ မန္တလေးတွင် ထွန်ကားခဲ့သော စပ်ပန်းချီမဏ္ဍပ် ရုပ်လုံးအတတ်၊ ဆေးရေးပန်းချီ အတတ်များဖြင့် အစွမ်းကုန် ခြယ်သ ထားသည့် အလှပြယာဉ်များသည် နဂါးရုပ်၊ ခြင်္သေ့ရုပ်၊ နယားရုပ်၊ ဟင်္သာရုပ်၊ ဇာမဏီရုပ်၊ ပဉ္စရူပရုပ်၊ ဥဒေါင်းရုပ်၊ ငန်းရုပ်၊ ကြက်ရုပ်၊ နန်းမြင့်ပုံ၊ နန်းဆောင်ပုံများဖြင့် ရွှေပြားငွေပြား ပန်းချီထည်များ စပ်ဟပ် ခြယ်သကာ အလှကြီးလှလျှက် ရှိနေသည်။
မြို့မိမြို့ဖများ ဦးဆောင်သည့် မဟာသင်္ကြန် ပွဲတော်ကျင်းပရေး ကော်မီတီ၏ အချက်ပေးသံနှင့် အတူ ခေတ်ပေါ် တူရိယာများဖြင့် စတင်တီးမှုတ်လိုက်သောအသံက ကြက်သီးမွေးညှင်းထမျှ ထွက်ပေါ်လာ၏။
ကိုယ့်အရှင် ကိုယ့်သခင် ရှိစဉ်ကာလ သင်္ကြန်တော်ကျသည်နှင့် မြ၀တီမင်းကြီးဦးစ ရေးသားခဲ့သည့် “စံရာတောင် ကျွန်းလုံးဥသျှောင် ကျင်ငယ်လေ” အစချီ “ဘုန်းတော်ဘွဲ့” ကြိုးသီချင်းသံကို စောင်းသံနွဲ့ညှင်းဖြင့် သာယာ နာပျော်ဖွယ် ကြားခဲ့ရသည်။
အခု…. မဟာအတာ သင်္ကြန်ပွဲတော် အကြိုနေ့ညနေ ဆည်းဆာတွင် “စံရာတောင်ကျွန်း” ကြိုးသီချင်း အလိုက်တွင် စာသားများ ရေးစပ် ထည့်သွင်းထားသည့် “အေးတဲ့ရေ” ဟူသော သီချင်း……။
မန္တလေး ဆိုင်းတန်းရပ်က မြို့မဗုဒ္ဓဝေယျာဝစ္စတူရိယာအသင်း၏ ငွေငန်းရုပ်လုံး အလှဆင်ထားသော မြို့မငွေငန်း အလှပြယာဉ်မှ မြို့မငြိမ်းနှင့် ကိုရင်လေးတို့ရေးစပ်ကာ အသင်းသားများ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တီးမှုတ် လိုက်ကြသည်။
ပလုတ်တုတ် ဗုံတောင်သံနှင့် အတူ အနောက်တိုင်း လေမှုတ်တူရိယာများဖြင့် မဟာဂီတတေးသွားကို တီးမှုတ်သော သီချင်းက တငြိမ့်ငြိမ့် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကန်တော့ပွဲညွန့် တင်ဆောင်မည့် ရှေ့ပြေးကားနှင့် နောက်မှ ငွေငန်း အလှပြယာဉ် ဦးဆောင်သော အလှပြ ယာဉ်တန်းကြီးက သီချင်းတေးသွားသံနှင့် အတူ မဟာမုနိဘုရားကြီးထံ သင်္ကြန်ကြို ကန်တော့ပန်းဆင်ရန် စီတန်း လှည့်လည်ကြသည်။
ပိတောက်တွေ ပွင့်နေသည့် လမ်းတလျှောက်တွင် မြို့လူထုက လမ်းလုံးပြည့် မျှမက အိမ်ရှေ့၊ အိမ်ပေါ်ဝရံတာ၊ ပြတင်းပေါက်များမှာထိ တိုးဝှေ့ထွက်ပြူ ကြည့်ရှုသြဘာ ပေးကြသံများလည်း ညံမစဲ…..။
သီချင်းသံက လမ်းလုံးညွှတ်မျှ အပြည့်အလျှံ……။ ထိုသို့သော နရီစည်းဝါးနှင့် မဟာဆန်သည့် သင်္ကြန်တေးသွား အပြီး မြူးကြွသော စည်းချက် ဒိုးဆစ်ကွက်များနှင့် အတူ သွက်လက်သော သီချင်းတပုဒ်ကို မြို့မငွေငန်း အလှပြ ယာဉ်ကြီး က မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တီးမှုတ်လိုက်သည်။ အလှပြယာဉ်ပေါ်ပါသည့် အသင်းသားများသာမက နောက်မှ လိုက်ပါလာ သည့် အခြား အလှပြယာဉ်များနှင့် အတူ ကြည့်ရှုအားပေးကြသည့် ပရိသတ်များကပါ စည်းချက်အလိုက် လက်ခုပ်တီးကာ ကြည်နူးပျော်ရွှင် သွားကြသည်။
“သင်္ကြန်နှစ်ဦး တူးပို့…..၊ တူးပို့
သင်္ကြန်မယ်များ တူးပို့…၊ တူးပို့
ငွေငန်းသံစုံ တူးပို့၊ တူးပို့
မယ်တို့ကိုလည်း တူးပို့ တူးပို့ မာပါစေခင်ဗျာ”
ဤသီချင်းက အလင်္ကာကျော်စွာ မြိ်ု့မငြိမ်း၏ နာမည်ကျော် “တူးပို့၊ တူးပို့” အမည်ရှိ သင်္ကြန်သီချင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သင်္ကြန် အခင်းအကျင်း အပြောင်းအလဲတွင် သီဆိုကြမည့် သီချင်းများက ရှေးရှေး ဘုရင့်ခေတ်ကကဲ့သို့ နရီစည်းလေးကြီးနှင့် မဖြစ်တော့။ မြူးကြွသွက်လက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်သီချင်းများ ဖြစ်ရတော့မည်။ လူတိုင်း၏ ရင်ခုန်သံကို ကိုယ်စားပြုသည့် စည်းချက်ဖြစ်ရတော့မည်။ ဘာတူရိယာမှ မပါဘဲ၊ လော်ရီကားကြီးပေါ် စုပြုံတက်ပြီး သင်္ကြန်ပျော်ကြစဉ် ကတည်းက၊ ကားဘော်ဒီကို ရေခွက်၊ ဖလား၊ ရေပုံးများနှင့် ခေါက်ကြသည့် စည်းချက်ကိုက ‘ဒုန်း၊ဒုန်း၊ဒုန်း….’၊ တချက်နား….။ ဤ စည်းချက်ပင် ဖြစ်သည်။
(ဒုန်း)၊ (ဒုန်း)၊ (ဒုန်း)၊ (…….)
(ဒုန်း)၊ (ဒုန်း)၊ (ဒုန်း)၊(……..)
ထိုစည်းချက်နှင့် လိုက်ဖက်သော ဒိုးဆစ်ကို ထည့်သွင်းလိုက်သောအခါ
‘ဗေးပို့၊ တူးပို့၊ တူးပို့၊ တူး’
‘ဗေးပို့၊ တူးပို့၊ တူးပို့၊ တူး’ ဟူ၍ ဖြစ်လာတော့သည်။
မြူးကြွသွက်လက်သော စည်းချက်နှင့်အတူ၊ မြူးကြွသွက်လက်သော ဒိုးဆစ်သည် သင်္ကြန်၏ အမှတ်လက္ခဏာ၊ သင်္ကြန်၏ ‘အသံ’ အဖြစ် အားရကျေနပ်စွာ လက်ခံလိုက်ကြသည်။ ထိုစည်းချက်နှင့် လိုက်ညီသော ဒိုးဆစ်ကို စတင် တီထွင်တီးခတ်သူက ‘မြို့မတူရိယာအသင်း’ ဖြစ်သည်။ မြို့မငြိမ်း ဦးဆောင်သည့် ၀ိုင်းတော်သားများ ဖြစ်သည်။
ဤသို့ဖြင့် ထီးသုံးနန်းသုံး ပဒေသရာဇ်သင်္ကြန်၏ ကိန်းကြီးခန်းကြီး နရီစည်းဝါးကြီးမှ၊ အယုတ်အလတ် အမြတ်မရွေး၊ အများပြည်သူ အပေါင်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်သော ‘လူထု’ သင်္ကြန်(၀ါ) ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်အဖြစ် အဆိုပါ ဒိုးချက် ‘တူးပို့၊ တူးပို့’ က ပေါင်းကူးညီညွတ်သွားစေ ခဲ့သည်။